बैठकबाट प्रम ओली फेरि किन बाहिरिए ? – SunkoshiNews
बैठकबाट प्रम ओली फेरि किन बाहिरिए ?
काठमाण्डौं । बालुवाटारमा जारी नेकपा सथायी कमटिीको बैठकबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक सुरु हुनेबित्तिकै बाहिरिएका छन् । लगभग तीन महिनाअघि सुरु भएको स्थायी समितिको बैठक आज बालुवाटारमा पुनः बसिरहेको छ ।
प्रम ओली कोरोना सर्नसक्ने भन्दै बैठकबाट बाहिरिएको वालुवाटार स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य कमजोर भएका कारण कुनै पनि रोगले सजिलै संक्रमण गर्न सक्ने र रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर भएका कारण उनी बैठकबाट बाहिरिएको स्रोतले बतायो ।
बैठकका लागि दुबै अध्यक्षले संयुक्त दस्तावेज तयार पारेर छलफलका लागि बैठकमा पेस गरेका छन् । सबै सदस्यलाई उक्त दस्तावेज दुईदिन अगावै इमेलमार्फत जानकारी गराइएको थियो । अहिले सदस्यहरु उक्त दस्तावेजमाथि छलफलको क्रममा रहेका छन् ।
विवाद समाधानका लागि गठित ६ सदस्यी कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा अध्यक्षद्वयले बैठकको दस्तावेज तयार पारेको बताइएको छ ।
विदेशबाट आउने वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानेलाई अनिवार्य १४ दिन क्वरेण्टीन
‘रामे’ भनेर बोलाउदा वडाध्यक्षकै अगाडि गोबर खुवाईयो